ကုသိုလ်ကံ - Myanmar Network
Posted by Khin May Htay on September 25, 2010 at 15:33 in General Chit Chat (ရောက်တတ်ရာရာ)
လူတိုင်း မိမိအတွက် မိမိ သစ်ပင်ကိုမိမိ စိုက်ပျိုးနေကြတယ်..သတိမထားမိကြလို့သာ မသိကြတာပါ..သစ်ပင်ဆိုတာ အများကြီးရှိတယ်.. ညောင်ပင်. အုန်းပင် နွယ်ပင်.အစရှိသဖြင့် အများကြီးရှိကြတယ်.ဒါပေမဲ့ သက်တမ်းချင်းတော့ကွာခြားကြတယ်.. တချို့သစ်ပင်တွေဆို သက်တမ်းနှစ်ပေါင်းများစွာ ရှင်သန်ကြသလို တချို့ဆို သက်တမ်းတိုကြတယ်..ဥပမာ. မုန်ညင်းပင်လိုမျိုးပေါ့.. လူတွေဟာ နေ့တိုင်း ကံကိုအကြောင်းပြုပြီး ကုသိုလ် အကုသိုလ်
တွေကိုနေ့စဉ် ပြုနေကြတယ်.. အဲဒါ ကံဆိုတဲ့ သစ်ပင်ကို နေ့တိုင်းစိုက်နေကြတာနဲ့တူတယ်...ကုသိုလ်ကံနဲ့ အကုသိုလ်ကံ
ဟာ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင်. ကုသိုလ်ကံကိုပြုလုပ်တာ အပင်ကြီးတွေကိုစိုက်တာနဲ့တူတယ်..အကုသိုလ်ကံ ကိုပြုလုပ်တာ အပင်ငယ်လေးတွေစိုက်တာနဲ့တူတယ်.. အပင်ကြီးတွေဟာ စိုက်တဲ့အခါချက်ချင်း အကျိုးကျေးဇူးမခံစားရပါဘူး.ဥပမာ
အုန်းပင်. ဒူးရင်းသီးပင် . ညောင်ပင် စတဲ့အပင်မျိုးတွေပါ.စပါးပင်.မုန်ညင်းပင် ပဲပင်ပေါက်ပင် အစရှိတဲ့ အပင်ငယ်လေးတွေကြတော့ ချက်ချင်းစိုက် အချိန်တိုတွင်းမှာ စားလို့သုံးလို့ရတယ်...မတူတာက အပင်ကြီးတွေကကြီးတဲ့အခါ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားလို့ရတယ်....
မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံလုပ်ရင် ချက်ချင်းဖြစ်ပြီး.....ကောင်းမှုလုပ်ရင်ချက်ချင်း မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို...နားလည်နိုင်ပြီး
ကံသုံးပါးကို လုံအောင်ထိန်းလို့ အပင်ကြီးတွေစိုက်ပြီး....အချိန်ကြာမြင့်စွာ. အကျိုးကျေးဇူး ခံစားနိုင်ကြပါစေ.......
Ref : forwarded mail
Permalink Reply by Nant Thin Thin Hmwe on September 25, 2010 at 21:18
Right! We need to believe in past actions( Ateik Kan) we had done and the current actions we are doing. Last month, my laptop and hand phone was stolen in my office. I keep in my mind that I might have stolen the properties of others in my previous lives.And eveything is impermanent.For these believes and consideration, I can forgive the person/people who stole mine. Just sharing my experience.
Permalink Reply by Chaw Chaw Khine on September 25, 2010 at 22:14
မှန်ပါတယ် ။ ကိုယ်ပြုသောကံ...ပဲ့တင်သံကိုယ့်ထံပြန်လာမည် ။